Shir lagu xoojinayo Isdhexgalka bulshada oo lagu qabtay Deegaanka Huurshe | Dayniile.com
Home Warkii Shir lagu xoojinayo Isdhexgalka bulshada oo lagu qabtay Deegaanka Huurshe
Shirkaan oo ah dhameystirka Nabadda iyo Isdhexgalka bulshada Reer Xeraale iyo Huurshe oo socona doona Muddo 7 Maalina ah ayaa galabta ka furmay magaalada Huurshe ee Gobolka Galgaduud, kaasi oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u heshisiinta Galmudug, iyadoo inta uu socdo lagu lafa gurayo sidii looo dhameyn lahaa qilaafka ku kala dhex jira 2 badaan bulsho. waxaa furitaanka Shirkaan kasoo qeyb galay Wasiiro, Xildhibaanno ka tirsan Galmudug iyo wax garad
Guddomiha deegaanka Huurshe Axmed Nuur Cabdi Xamiid Macalin oo ugu horeyn munaasibadda ka hadlay ayaa ku dheeraadey faa’iidada ay leedahay isdhexgalka iyo Wada nolaanshaha, isagoo u mahadceliyay cid kasta oo ka qeyb qaadatay fidinta gogoshaan.
Xildhibaan Mursal Cabdirahmaan, Xildhibaan Mahad Xayir ahna wasiir Dowlaha howlaha guud iyo Wasiir hore Saadaq Sheekh Yuusuf ayaa si wadajira u soo dhaweeyay gogoshaan Nabadeed.
Sidoo kale wax garadka kulanka kasoo qeyb galay ayaa dhankooda ka mahadceliyay, ayna wada jir uga wada qeyb qaadan doonaan xoojinta Nabadda
Ugu danbeyn Xoghayaha joogtada ah ee Wasaaradda arimaha gudaha, federaalka iyo dib u heshisinta Galmudug Saleebaan Cabdulahi Xasan oo kulanka soo xiray ayaa labada bulsho ugu baaqay in ay nabadda iyo dowladnimada soo dhaweyaan.
Previous articleRooble oo caawa shir guddoomiyay kulan ay habka fogaan aragga ku yeesheen Golaha Wadatashiga Qaranka.
Next articleKumuu ahaa ninka baxsadka ah ay sida weyn ugu raad joogtay dowladda Shiinaha?
Waxaa Magaalada Muqdisho ka socda Shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qeyb galayaan Madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyadda, waxaana lagu waddaa...